3, 4, 5 Umatshini wokugaya amazinyo-News-VSmile Co., ltd
3, 4, 5 AXIS Machine Mental Milling
Ixesha: 2021-05-31 I ngxelo:13
Kwindawo yamazinyo edijithali, idatha yolwakhiwo eveliswe kunye nesoftware yeCAD iguqulwa yaba yimigca yokugaya i-CAM-processing kwaye ekugqibeleni yafakwa kwisixhobo sokugaya, siye sahlukanisa izixhobo zokwenza ngenani lezembe lokugaya:
a) izixhobo zokugaya ezi-3-axis
Olu hlobo lwesixhobo sokugaya sinamaqondo okuhamba kumacala omathathu omhlaba. Ke, iindawo zendlela yokusila zichazwe ngokukodwa ngamaxabiso X -, Y -, kunye no - Z. Utyalomali lokubala ke ngoko aluncinci. Ukugaya kwamacandelwana, ukungafani kwe-axis kunye nokuhlangana, nangona kunjalo, akunakwenzeka. Oku kufuna ukuthintelwa okubonakalayo kwezi ndawo. Zonke izixhobo ze-axis ezi-3 ezisetyenziswa kwindawo yamazinyo zinokujika icandelo ngo-180 ° ekuqhubeni phambili ngaphakathi nangaphandle. Izinto eziluncedo zezi zixhobo zokugaya ngamaxesha okugaya amafutshane kunye nolawulo olwenziwe lula kusetyenziswa izembe ezintathu. Ngenxa yoko, ezo zixhobo zokugaya zihlala zingabizi kakhulu kunezo zinenani eliphezulu of izembe.
Imizekelo yezixhobo ze-axis ezi-3: kwiLab (Sirona), eLava (3M ESPE), kwingqondo yeCercon (DeguDent).
b) izixhobo zokugaya ezi-4-axis
Ukongeza kwii-axes ezintathu zomhlaba, ibhulorho yoxinzelelo kwicandelo inokujikwa ngokungafaniyo ngokungafaniyo. Ngenxa yoko kunokwenzeka ukuba uhlengahlengiso lokwakhiwa kwebhulorho ngobude obukhulu bemilo ethe nkqo kwimilinganiselo yesiqhelo sokubumba kwaye ke ugcine izinto kunye nexesha lokugaya.
Umzekelo: Zeno (Wieland-Imes).
c) izixhobo zokugaya ezi-5 ze-axis
Ngesixhobo sokugaya se-5-axis kukwakho, ukongeza kubungakanani bethuba lesithuba esithathu kunye nebhulorho yempixano eguqukayo (i-axis yesi-4), ukubanakho kokujikeleza kokuphotha (5th axis). Oku kwenza ukuba kugaywe iijometri ezintsonkothileyo ezinamacandelwana, umzekelo, ii-FPDs zemihlathi esezantsi ekuguqulweni kwamazinyo okuphuma (isiphelo se-molar sifakwe kwi-medial plane), okanye isithsaba kunye ne-FPD indawo, ngenxa yokuncitshiswa kwe-anatomiki, bonisa indawo eziguqukayo. ngaphandle kwesakhelo.
Ubuncinci be-axis ye-4 yokugaya iyafuneka kwiyunithi yokugaya ukuze kulungiswe isakhiwo sale meko.
Nangona kunjalo, i-5-axis machining nayo iyathandwa ngakumbi kuba inika ithuba lokunyathela amanyathelo ngamanyathelo (ukunciphisa ixesha lokuhola), ivumela ukufikelela okungcono kwinxalenye yejometri, kwaye iphucula isixhobo sobomi kunye nokusebenza kwenkqubo ngokutsala itafile indawo efanelekileyo yokusika.
So Loluphi uhlobo machining kuya kufuneka ukhethe iprojekthi yakho. Konke kuza kwiimfuno zakho ezizodwa, uhlahlo-lwabiwo mali kunye nexesha. Ingcebiso yeengcali, Thetha nenye yeenjineli zethu ezichanekileyo ukufumana umdlalo ofanelekileyo kwiimfuno zakho.
I-PREV: Umatshini weZirconia Disc
OKULANDELAYO : Ukukhetha iZirconia
I-Vsmile Titanium engenanto
I-Vsmile HappyZir ST I-Zirconia ebekwe ngaphambili kwiBhloko iyahambelana ne-Amann Girrbach Cam
Vsmile HappyZir SHT Multilayer Zirconia Ibhlokhi